Isebenza kanjani i-Dual SIM ye-iPhone XS neXS Max entsha | Izindaba ze-IPhone
ULuis Padilla | | I-iPhone Xs, Okokufundisa namanyuwali
Ingenye yezinto ezintsha ezinhle ze-iPhone XS neXS Max. Ekugcineni, ngemuva kweminyaka eminingi ngamahemuhemu ngakho, I-Apple yethule i-iPhone yayo ngenketho ye-Dual SIMYize ikwenza ngendlela ehlukile kunamanye ama-brand, futhi esikhundleni sethreyi ephindwe kabili yokubeka amakhadi amabili, ivula ikhadi lomzimba kuphela (i-nanoSIM njengenjwayelo) ne-eSIM.
Yini i-eSIM? Singaba kanjani nezinombolo ezimbili efonini yethu? Singahamba kanjani sisuka enombolweni eyodwa siye kwenye? Yimiphi imisebenzi esingayisebenzisa ngenombolo ngayinye? Sikunikeza yonke imininingwane odinga ukuyazi ngezansi.
1 Yini i-eSIM?
2 Izinzuzo ze-eSIM
3 I-SIM Yesibili ye-iPhone
4 Yini engiyidingayo ukusebenzisa i-eSIM ku-iPhone
5 Ngizoshaya kusuka kuziphi izinombolo izingcingo
6 Ngizowathola kanjani amakholi?
7 Kuthiwani ngedatha yeselula?
8 Ngibona kanjani ukutholakala kutholakala?
9 Futhi i-iPhone XR
Sonke siyayazi i-SIM khadi yeselula yethu, ebilokhu inciphisa usayizi wayo kuma-nanoSIMs amanje cishe onke ama-smartphones emakethe asevele enawo. Ngomzamo wokuqhubeka nokunciphisa usayizi wamadivayisi, imboni ikwenzile yeqa yaya ku-eSIM, nokuyinto edlula leyo i-chip chip ngaphandle kweminye imihlobiso futhi ifakwe ku-terminal, ngaphandle kokushintshwa. Lokhu kunciphisa kakhulu isikhala esithathwa ngokungadingi ithreyi noma uPius ukufunda i-chip, ngoba konke kuhlanganisiwe kudivayisi.
Lawa ma-iPhone awawona amafoni okuqala ukuba ne-eSIM, njengoba kuhlala kwenzeka, kepha njengoba benayo, siqinisekile ukuzwa okuningi ngalobu buchwepheshe futhi opharetha bazokweqa ukuzivumelanisa nayo, ngoba kuze kube manje bekuyinto ecishe ibe i-anecdotal inqunyelwe kumadivayisi ambalwa ahambisanayo. Eqinisweni, iVodafone neOrange sekuvele kumemezele ukuhambisana eSpain nakwamanye amazwe ama-opharetha amaningi nawo athathe isinyathelo sokubheka lobu buchwepheshe.
Ngaphezu kokunciphisa usayizi nokuqeda izingxenye ezihambayo ngaphakathi kwe-smartphone, okuhle ngaso sonke isikhathi ekuqineni kwedivayisi, i-eSIM inezinye izinzuzo eziningi, kufaka phakathi ithuba lokushintsha ukusuka enombolweni eyodwa iye kwenye ngaphandle kwesidingo sokukhipha noma yiliphi ikhadi, kuphela kusuka kuzilungiselelo zedivayisi yethu. Lokhu kusho ukuthi ungaba nemigqa eminingana emisiwe ku-terminal yakho bese usebenzisa leyo ekufanele kakhulu esimweni ngasinye ngoba ukushintsha kusuka kokunye kuya kokunye kuyindaba yemizuzwana.
Izinkinga nazo zinikeziwe, njengoba ungadingi i-SIM khadi evela ku-opharetha wakho omusha, futhi izinguquko zingaba khona ngaso leso sikhathi, ngaphandle kokuchitha amahora amaningi (noma izinsuku) ngaphandle kocingo ngoba ulayini omusha awukenziwa usebenze. Ziyizibonelo nje ezimbili kweziningi esingazibeka, ngoba i-eSIM inezinzuzo zomsebenzisi kuphela, futhi ekugcineni kubonakala sengathi ilapha ukuhlala.
I-SIM Yesibili ye-iPhone
I-Apple yethule i-iPhone yayo entsha, futhi enye yezinto ezintsha zayo kwaba yilokhu kanye. Kuze kube manje izingcingo ezine-Dual SIM zinamathileyi amabili (noma kabili) ukubeka amakhadi womzimba womabili. Eminye ikuvumela ukuthi usebenzise yomibili imigqa yezwi, eminye eyodwa yezwi neyodwa yedatha, noma umugqa owodwa nje kufanele ushintshe ngesandla ususe komunye uye komunye. I-Apple ikhethe i-nanoSIM ebonakalayo kuphela, nethreyi layo elijwayelekile, ne-eSIM. Uma ungahleleli ukusebenzisa i-eSIM, ngeke uqaphele lutho olusha, ngoba konke kunjengaphambilini.
Yini ongayenza ngenxa yalesi sici esisha? Ungaba nolayini ababili befoni ku-iPhone yakho, eyodwa yezingcingo zomuntu siqu kanti enye eyizingcingo zomsebenzi. Iphupho labaningi ligcwaliseka ekugcineni futhi ngeke besadingeka ukuphatha amafoni amabili. Noma ungaba nomugqa owodwa wezwi bese omunye ube wedatha, usebenzise amanani angcono kakhulu emakethe noma lowo onikeza amaGigas wedatha amaningi. Ngeke usaboshelwa kuzinga elibizayo lezwi ngoba likunikeza idatha eningi ongayisebenzisa. Noma ungashintshela kuzinga lendawo noma isilinganiso sedatha lapho uya phesheya, ngaphandle kokuyeka inombolo yakho ejwayelekile.
Yini engiyidingayo ukusebenzisa i-eSIM ku-iPhone
Into yokuqala oyodinga ukuthi, ngaphezu kwe-iPhone XS yakho noma i-XS Max, ukuthi opharetha wakho uyahambisana. Okwamanje eSpain, yiVodafone ne-Orange kuphela, noma kunalokho, kuzoba ngoba awukwazi okwamanje ukuthenga lo mkhiqizo. Le sevisi ye-eSIM inenani elizohluka ngokuya ngesilinganiso ositholile, kepha ngamafuphi singasho ukuthi amanani abiza kakhulu afaka inombolo yamahhala ye-eSIM, kanti amanye amanani anenani elingu- € 5.
Okwamanje akunakwenzeka ukwenza isivumelwano nge-eSIM kuphela, kufanele ube nolayini "ojwayelekile" ne-Sim yakho ephathekayo, futhi okutholayo yimigqa eyengeziwe ene-eSIM isebenzisa leyo nombolo efanayo ongayilungisa kumadivayisi akho. Ukuze uqonde, uma ufuna ukusebenzisa umugqa wakho womsebenzi ku-iPhone yakho, kufanele uqashe i-eSIM emgqeni womsebenzi, shiya i-SIM ekhaya bese ulungiselela i-eSIM ku-iPhone yakho, nayo ezofaka iSIM yomuntu siqu kuthileyi wayo.
Ngaphezu kwalokhu, uzodinga ukuthi uhlelo lokusebenza lwe-opharetha yakho lufakwe ku-iPhone yakho, noma ikhodi ye-QR opharetha yakho azokunikeza yona. Iya kokuthi "Izilungiselelo> Idatha yeselula> Faka uhlelo lwedatha yeselula" bese uskena ikhodi ye-QR akunike umhlinzeki wakho. Ukuyisebenzisa, kungahle kudingeke ukuvula uhlelo lwe-opharetha yakho ku-iPhone yakho. Ngale ndlela ungangeza izinhlelo eziningi ngendlela ofuna ngayo nge-eSIM, kepha ungasebenzisa eyodwa yazo kuphela, kufanele ushintshele kwenye iye kwenye kusuka kulezi zilungiselelo ezifanayo.
Njengesinyathelo sokugcina, kufanele uqambe umugqa ngamunye ukuze ukwazi ukuwakhomba njalo lapho ufuna ukushintsha, bese ukhetha ukuthi ufuna umugqa wakho wokuzenzakalelayo ube yini nokuthi usebenzise muphi omunye umugqa. Kufanele wazi ukuthi yomibili imigqa yeselula izokwazi ukuthola nokushaya izingcingo, i-SMS ne-MMS, ngasikhathi sinye, kepha eyodwa yazo ingasetshenziswa njengenethiwekhi yedatha. Ngakho-ke izinketho i-Apple ekunikeza zona yilezi:
Sebenzisa umugqa owodwa njengenethiwekhi eyinhloko enayo yonke imisebenzi nenethiwekhi yesibili kuphela ngocingo ne-SMS
Sebenzisa umugqa owodwa njengenethiwekhi enkulu yezingcingo ne-SMS kanti enye njengenethiwekhi yedatha kuphela.
Ngizoshaya kusuka kuziphi izinombolo izingcingo
Uma ucabanga ukuthi umise yomibili imigqa yamakholi ne-SMS, uzoshaya izingcingo kusuka kuyiphi inombolo? Ngeke kudingeke ukuthi ushintshe imigqa njalo ngambili kathathu, kusukela lapho ufonela oxhumana naye Uzohlala usebenzisa umugqa owugcine ukuwusebenzisa nalowo oxhumana naye. Uma ungakaze uyibize, izosebenzisa umugqa owumisile njengenethiwekhi eyinhloko.
Ungashintsha inombolo ofuna ukuyibiza ngayo oxhumana naye ngamunye, noma kusuka kuhlelo lokusebenza lwefoni uqobo ungakhetha ulayini ohlukile kunalowo osetshenziswe ngokuzenzakalelayo. Ungakwenza futhi kusuka kuhlelo lokusebenza lwemilayezo ukuthumela umlayezo ovela enombolweni ngaphandle kwaleyo ekhethwe yi-iPhone ngokuzenzakalela.
Endabeni iMessage neFaceTime, ngeke ukwazi ukusebenzisa yomibili imigqa ngasikhathi sinye, ngakho-ke kusuka kuzilungiselelo zedivayisi kufanele ukhethe ukuthi iyiphi ofuna ukuyisebenzisa nalezi zinsizakalo ze-Apple uma ungafuni ukugcina leyo ekhethwe ngokuzenzakalela.
Ngizowathola kanjani amakholi?
Uma ulungiselele imigqa emibili yezingcingo, ungabathola kunoma yiziphi izinombolo ezimbili ngaphandle kokwenza noma yini, ngeke kudingeke ushintshe ukusuka komunye uye komunye. Vele, uma ubambe ulayini ocingweni futhi bakushayela kolunye ulayini, luzoya ngqo ku-voicemail, kodwa ngeke waziswe nganoma yiziphi izingcingo ezingabanjwanga kuleyo nombolo yesibili, imininingwane okufanele uyicabangele.
Kuthiwani ngedatha yeselula?
Ungasebenzisa umugqa owodwa kuphela wedatha yeselula noma ngabe imigqa emibili oyilungisile inayo. Uma ufuna ukushintsha ukuthi yimuphi umugqa owusebenzisela idatha yeselula, ungaya ku- "Amasethingi> Idatha yeselula" bese ukhetha ukuthi iyiphi inombolo ofuna ukuyisebenzisela lo msebenzi. Kuyafana uma ufuna ukumisa noma iyiphi inketho ngaphakathi kwezilungiselelo zedivayisi. Kufanele wazi futhi ukuthi uma uthola ucingo enombolweni engenayo idatha yeselula esebenzayo, i-iPhone yakho ngeke ibe nayo i-inthanethi phakathi naleyo kholi, ngoba enye inombolo izokwenziwa "ingasebenzi" ngaleso sikhathi.
Ngibona kanjani ukutholakala kutholakala?
Uma ubheka izithombe ezikule ndatshana uzobona ukuthi ngakwesokudla, phezulu, ukumbozwa kuvela ngezithonjana ezimbili: ibha ekhuphukayo yakudala nolayini wamachashazi ngezansi nje. Ngale ndlela uzokwazi ukumbozwa kolayini ngamunye. Uma ufuna ukubona imininingwane eminingi, ungakhombisa i-Control Center bese phezulu ngakwesobunxele uzobona imigoqo yokufaka igama labahlinzeki ababili obasebenzisayo, noma ngabe bayafana.
Futhi i-iPhone XR
I-iPhone XR, imodeli ebiza kakhulu esethulwe yi-Apple kodwa ezothatha isikhashana ukufika, Futhi unethuba lokusebenzisa i-Dual SIM nge-eSIM. Sicabanga ukuthi ukusebenza kuzofana, kepha lo mhlahlandlela ususelwa kulwazi oluvela ku-Apple futhi ubhekisa kuphela ku-XS naku-XS Max, ngakho-ke sizolinda imininingwane engaphezulu ngaphambi kokufaka i-XR kule ndatshana.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » I-iPhone Xs » Isebenza kanjani i-Dual SIM ye-iPhone XS neXS Max entsha
Ngicabanga ukuthi lapho ithi "Izithiyo nazo zinikeziwe" kubhekiswa "ekuphatheni" akunjalo?
Intamo kaGonzalo kusho
Imininingwane ithi, kuzokwenzekani uma kuyo yomibili imigqa ngidinga ukusebenzisa i-WhatsApp?
Phendula uGonzalo Cuello
Ukuze leyo WhatsApp izovuselelwa futhi ivumele izinombolo ezimbili kuhlelo lokusebenza olufanayo
UJuan A. Diaz kusho
Ingabe i-esim ingavinjelwa ngesikhathi esithile ukuze ingatholi izingcingo ngesikhathi esithile?
Phendula uJuan A. Diaz
Le yividiyo ka-Apple yemizuzu emibili efingqiwe kaKeynote
Uyini umehluko phakathi kwe-iPhone XS ne-iPhone XR